India, niteraka adihevitra momba ny rafitry ny fitsaràna ny namonoana tsy nandalo fitsaràna ireo efatra voampanga ho nanolana · Global Voices teny Malagasy
"Efatra no lasa. Firy sisa tavela? Hamaly rariny ny firenena"
Voadika ny 11 Febroary 2020 12:33 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Ελληνικά, українська, Italiano, Français, Español, English
Fanentanana tanaty gazety iray nankalaza ilay famonoana. Fandikàna: Efatra izay no lasa. Firy sisa tavela? Hamaly rariny ny firenena. Saripika nozaraina be tao amin'ny pejy Facebook “Indians of Late Capitalism”
Ny famonoana tsy nandalo fitsaràna an'ireo efatra nanolana tao India dia nitarika ho aminà adihevitra mivaivay teo amin'ireo nitehaka ny fanaovana fitsarambahoaka nandingànana ny fihisaran'ny fitsaràna, sy ireo hafa izay mahatsapa fa ho lasa ohatra ratsy io tantara io.
Ny 27 Novambra 2019, niharan'ny fanolànana tambabe tamin-kerisetra i Dr. Priyanka Reddy, ary novonoina tao Hyderabad. Tokotokony ho tamin'io fotoana io ihany, olona iray hafa sisampaty taminà fanolànana no nisy nandoro raha teny an-dàlany handeha hamonjy fakàna am-bavany teny amin'ny fitsaràna, ary dia maty noho ny fitsaharan'ny fony taorian'izay.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny trangam-panolànana manerana ny firenena, mafy sy nipatrapatraka ny hatezerana, ary marobe ireo nitaky fandraisana andraikitra haingana, ka isan'izany ny fanaovana lalàna henjana kokoa sy hetsika hanoherana ireo mpanolana. Tao anatin'ny kabariny ho an'ny antenimeran-doholona aza, ilay mpikambana ao amin'ny antenimiera, Jaya Bachchan, dia niteny fa tokony ho darohana ho faty ireo mpanolana.
Andro vitsy taorian'ny nahitàna ny Dr. Priyanka Reddy, mba hamerenana ny fizotry ny zava-nitranga dia nentin'ny polisy tao Hyderabad niverina teny amin'ny toerana nisehoan'ilay heloka bevava ireo lehilahy efatra voampanga. Araka ny voalazan'ny polisy dia nanandrana nandositra teny amin'ny toerana nanaovana ilay famerenana ireo lehilahy ireo ka dia maty voatifitra. Taorian'io vaovao io, naneho ny heviny teny anaty media sôsialy ireo mpisera anaty aterineto, nanasongadina ny fizarazaràna be hita tamin'ny fanehoankevitry ny vahoaka.
“Mifanena amin'ny fahafatesana”
Ny encounter killing, ho adikantsika tsotsotra amin'ny hoe ‘mifanena amin'ny fahafatesana’ dia fomba fiteny iray ao Azia Atsimo (indrindra fa ao India sy Pakistàna) entina hamaritana ireo vono olona ataon'ny polisy na ny tafika, nefa tsy mandalo fitsarana. Araka ireo tatitra, manana tantara lavabe amin'ny resaka famonoana tsy mandalo fitsaràna i Hyderabad , ary efa im-betsaka ny olona no nanakiana ny fandraisan'ny polisy ny toeran'ny mpitsara na mpanapa-doha. Ambaran'ny Lalampanorenana Indiàna ny fiarovana ny olompirenena tsirairay manoloana ny hetsika atao ivelan'ny voalazan'ny lalàna.
Raha tsy mifanaraka amin'ny dingana voalazan'ny lalàna, tsy misy olona azo alàna aina na tsy omena fahalalahana . – Andininy faha- 21 ao amin'ny Lalampanorenana Indiàna
Amin'ny raharahan'ireo efatra voampanga ho mpanolana, manoratra ao amin'ny The Economics i T K Arun fa mibaribary be ny fanitsakitsahan'ny fanjakan'i Hyderabad ny zo fototra ananan'ireo voampanga.
Nisy mpisera hafa ao amin'ny aterineto nandray ny media sôsialy mba hitakiana ny hisian'ny hetsika sahaza sy araka ny lalàna, mifanaraka amin'ny tranga tsirairay miseho.
Manafintohina. Fa lasa inona isika ity e? Inona no porofo milaza fa tena ireo tokoa no tena nahavanon-doza? Ananantsika ve ny vaovao momba ny fanadihadiana na ny porofo manamarina tsy azo isalasalàna an'ilay heloka? Mety tsy nananan-dry zareo akory aza na dia ny mpisolovava, tsy nohenoina nalaina am-bavany akory. Fa dia novonoina noho ny #Fifanenàna, dia mankalaza ery isika?
— Sanjukta Basu (@sanjukta) 6 Desambra 2019
Nahavita asa tsara i Modi tamin'ny fametrahana ny vinan'i India ho lasa hery goavana izay ny herisetra no entiny manaporofo ny tanjany.
Saingy fampahatsiahivana: ny fanitsakitsahana ny rafitry ny fitsaràna ao aminao ihany sy ny fampiasàna herisetram-panjakana amin'ny vahoakanao dia tsy manaporofo afa-tsy ny halemena. #polisyaohyderabad
— Gurmehar Kaur (@mehartweets) 6 Desambra 2019
Na izany aza, nisy fanohanana nipatrapatraka ho an'ireo polisy ka nilaza ilay famonoana ireo lehilahy efatra ho hetsika famaizana ‘ara-drariny’.
Eny, ela ny ela, aoka ity andro ity ho fanombohan'ny vanimpotoana iray vaovao hahatsapàn'ireo ankizintsika sy ny vehivavy hoe afaka ny ho tony sy hiaina am-pilaminana izy ireo eto India.
Ny rariny malaky be toa io no hametraka tahotra any anatin'ireo ratsy saina,
Nivaly ny vavaka tamin'ny fo nataonay #polisyaohyderabad
Mipao-tsatroka #Encounter pic.twitter.com/0QbqJGDHBT
— Yogita Bhayana (@yogitabhayana) 6 Desambra 2019
Hafatra iray mahery avy amin'ny Konidela ! 🙏🏼
Mirehareha fa vehivavy! #RarinyHoAniDisha #rarinyhoanipriyanakareddy #tanterakanyrariny #hyderabadpolice #TelanganaPolice #ramcharan #Chiranjeevi pic.twitter.com/EuXVBh2OkZ
— Upasana Konidela (@upasanakonidela) 6 Desambra 2019
Tehafako ny #polisyaohyderabad izay nanao dingana mavitrika tao anaty fotoana fohy & nanome ny famaizana sahaza ho an'ireo mpanao heloka. Tsy tokony hanakivy ny polisy isika. Mahakivy ny polisy tao Gujarat ireo tranga tsy tena izy miresaka famonoana tsy nandalo fitsaràna. Dr Priyanka Reddy. #tanterakanyrariny #HyderabadEncounter pic.twitter.com/e2m8UvG5Uu
— Parimal Nathwani (@mpparimal) 7 Desambra 2019
#WATCH Hyderabad: Fanehoankevitr'ireo tovovavy mpianatra rehefa nandre ny vaovao momba ireo voaheloka tamin'ilay famonoana tsy araka ny lalàna sy ilay fanolànana vehivavy mpitsabo biby pic.twitter.com/z238VVDsiC
— ANI (@ANI) 6 Desambra 2019
Mihevitra aho fa anio dia mijoro eo an-damosin'ny #polisyaohyderabad ny raimpianakaviana tsirairay, ny ray aman-dreny tsirairay, ny anadahy tsirairay eto amin'ny firenena. Mirary soa ho azy rehetra aho.
— Ashish Khetan (@AashishKhetan) 6 Desambra 2019
Raimpianakaviana iray ao Kerala no voatery namono ilay nanolana sy namono ny zanany vavy 13 taona, satria nafahan'ny fitsaràna tao Kerala tamin'ny alàlan'ny fandoavana onitra ilay mpanolana. Mpitovo manana milina fanjairana ilay ‘tsy ampy taona’ tao anatin'ny raharaha tao #Nirbhaya. Anatin'ny toedraharaha tahaka izany, ahoana ianao no TSY HO faly amin'ny #fifanenàna?
— Shefali Vaidya (@ShefVaidya) 6 Desambra 2019
Araka ny lazain'ny Times Now News, nilaza ny rain'ny niharan-doza fa:
Andro folo izao no lasa hatramin'ny nahafatesan'ny zanakovavy. Mankasitraka ny polisy sy ny governemanta aho ny amin'izany. Mandry am-piadanana ankehitriny ny fanahin'ny zanako.
Hatramin'izao, mikatso ny fifanakalozankevitra momba ny valinkafatra malaky sy ny rafi-pitsaràna mihisatra.